Ogwu uhie: ojiji, nsogbu, ngwa - Mkpụrụ ubi - 2019
Uru na nsogbu nke ose uhie: ọgwụ ọgwụ nke seasonings
Ị nwere ike ikwu ọtụtụ ihe gbasara uru ndị na-esi ísì ụtọ. Enweghị ha, nri ahụ na-adị ọhụrụ. Ma, ha nwekwara àgwà ọjọọ. Tụlee ihe ọzọ na ngwa nri: uru ma ọ bụ nsogbu ahụ ike. Dịka ọmụmaatụ, were ose na-ekpo ọkụ.
Nri oriri na calorie
Kedu ihe eji?
Mkpa na contraindications
Eberi na ose - mkpụrụ nke osisi si na ose. Osisi na-eto 60 cm. Ihe na-ekpo ọkụ na ose yiri ụdị ellipse. Mkpụrụ osisi elongated, mgbe ụfọdụ - gburugburu. Ụcha mkpụrụ osisi ahụ nwere ike ịdị iche. Ọtụtụ mgbe nwa, ọbara ọbara ma ọ bụ odo. Ihe ísì ụtọ nke mkpụrụ osisi ahụ dị mma. Nri ahụ dị iche: ma ilu ma dị ọkụ. Nri nkpuru na-enye mkpụrụ nke osisi ahụ. Ndị mmadụ na-eji ihe oriri a eme ihe karịrị afọ 6000. Ọzọkwa, a na-ejikwa ihe ndị e ji eme ihe na-edozi mma, maka ime mma. Kedu ihe ose na-acha uhie uhie maka mmadụ: uru ma ọ bụ nsogbu? Ndien ntak emi enye enen̄erede ama?
Mkpụrụ ahụ nwere otutu carbohydrates na protein. 100 g nke akwukwo nri nwere 5.21% nke ndi na-edozi na 1.121% nke carbohydrates. Abụba - obere ego. Nri calorie bụ obere - 100 g nwere nanị calorie 40.
Ọ dị mkpa! E nwere ụdị ose na-acha uhie uhie, site na kọntaktị nke na akpụkpọ ahụ nwere ike ịpụta iwe na-adabere na zhguchest pụrụ iche.
Ojiji nke ose dị ilu maka ahụ dị ịrịba ama, ebe o nwere ihe dị iche iche nke vitamin na ihe ndị na-emepụta ihe. Ya mere, 100 g nke ngwaahịa nwere 0,8 mg vitamin PP. Tụkwasị na nke ahụ, beta-carotene na 0.1 mg dị na otu mkpụrụ nke mkpụrụ osisi ahụ. E nwekwara vitamin A. N'ihe oriri na vitamin nke otu B: B1, B2, B6 na B9 na nha 0.08, 0.09, 0.3 na 0.01 mg. Ihe oriri a bara ọgaranya na vitamin C, nke dị mkpa maka oyi. Vitamin E, nke bara ezigbo uru maka ntutu isi na mbọ, dịkwa na osisi ahụ: ịta nri 100 g bụ 0,7 mg.
Vitamin E nwekwara ike inwe osisi ndị dị ka horseradish, utu mkpụrụ, zizifus, ukpa, piich na cumin cumin.
Na mgbakwunye na vitamin na mkpụrụ nke ọtụtụ ihe nchọta ihe. Ya mere, 100 g nke ngwaahịa ahụ nwere 7% nke potassium chọrọ kwa ụbọchị na 1% nke calcium. Magnesium nwere 14 mg, nke bụ 4% nke ọnụego dum nke mmewere kwa ụbọchị. 90% nke ihe oriri kwa ụbọchị nke sodium bu na 100 g nke nkpuru. E nwekwara site na ya, ígwè, manganese na selenium na ose. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka abamuru na nsogbu nke na-acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie, nchịkwa ga, n'ezie, na-abaghị uru nke osisi ahụ.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị na-eri nri chili mgbe nile, ị nwere ike idalata ibu.
Nri akwukwo akwukwo a nwere ihe kariri ihe omuma iri abuo na vitamin 40. Na mgbakwunye, ọ gụnyere ọtụtụ nri ndị ọzọ. Òtù Ahụ Ike Ụwa etinyewo ose na ngwaahịa TOP 10 nke WHO na-adụ ọdụ iji ụbọchị ọ bụla.
Tinye akwukwo nri iji mee ka ahuike na mma. Kedu ihe ose dị ọkụ bara uru?
A na-eji osisi ahụ maka igbochi na ọgwụgwọ ụfọdụ ọrịa. A na-eji ya eme ihe na omenala na omenala. Tụlee ihe atụ ụfọdụ ọrịa ndị na-eji ose eme ihe mgbe niile. Mkpụrụ ahụ na-enyere aka ịkwụsị ọbara mgbali elu. Ọ na-eme ka ahụ ike dịkwuo mma. Ọzọkwa, osisi ahụ na-efesa arịa ọbara. Tụkwasị na nke ahụ, nwa ebu n'afọ na-ebute ọrịa. Osisi ahụ nwere ihe ndị dị ka capsaicinoids. Ha na-atọ ụtọ ihe oriri a. Ọ bụkwa n'ihi ha na nje bacteria ndị na-emerụ ahụ na-anwụ anwụ ozugbo ha na-abanye na mmiri ọkụ ya.
Osisi ahụ na-enyere ahụ aka ịnagide tonsillitis na-efe efe, ọrịa mgbawa na nsị nsị. Onye ọ bụla maara otu n'ime ọrịa kachasị njọ nke eziokwu - cancer. O yiri ka karịa ose na-acha ọbara ọbara na-acha ọkụ na-arịa ọrịa dị oké njọ? Otú ọ dị, dị ka nnyocha gbasara nchịkọta akụkọ si kwuo, ọ pụtara na ndị na-eri nwa ebu n'afọ na-adị 90% obere ka ọ ga-enwe ọrịa cancer. Ndị ọkà mmụta sayensị aghọtabeghị eziokwu a. Ma ọnụ ọgụgụ bụ ọnụ ọgụgụ.
Iji mee ka usoro ihe egwu ahụ dị ike, ị nwere ike iji osisi ndị dị ka: viburnum, cumin, agwa, udara udara, hawthorn, akwụkwọ nri na ọka.
Tụkwasị na nke ahụ, a ghaghị iji osisi ahụ mee ka usoro ahụ ụjọ nwee ike iji mee ka ihe mgbu kwụsị. Ọ na-eme ka nke a. Ọkụ na-ere ọkụ na-ejikọta akpụkpọ anụ mucous nke onye ahụ. Ọ na-egosi uto a dị ụtọ na ụbụrụ. N'ọnọdụ a, ụbụrụ ahụ na-amalite ịbawanye, onye ahụ na-amalite ịṅụ mmiri na hormone endorphin na-atọba n'ime ọbara. Ọ bụ hormone a na-egbochi ọrịa mgbu. Ọzọkwa, site n'enyemaka nke osisi, a na-enwere ọrịa syndrome metụtara ọrịa arthritis psoria na ọrịa ogbu na nkwonkwo. Ị nwere ike igbochi ihe ngbu na ọrịa neuropathy na ọrịa osteochondrosis. Ọzọkwa, hormone a na-atụnye ụtụ maka ọdịdị dị mma ma nyere gị aka ihi ụra mgbe ụbọchị siri ike.
Tụkwasị na nke ahụ, ose na-acha uhie uhie nwere ụdị bara uru ndị dị otú ahụ dị ka ime ka usoro obi na-edozi ma gbochie mmepe nke ụdị ọrịa shuga 2. Osisi ahụ na-eme ka e nwee ọbara ọgbụgba, na-egbochi nkedo ọbara na atherosclerosis, na-ewusi ọbara ọbara ma na-eme ka ọbara gbasaa. Na mgbakwunye, ndị ọkà mmụta sayensị si Australia chọpụtara na ihe oriri na-ebelata shuga shuga. Tụkwasị na nke ahụ, nwa ebu n'afọ ga-enyere ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ aka ikpochapụ nke oge nsọ nsọ. Iji weghachite ovaries, ọ dị mkpa ka ị na-eri nri a mgbe niile.
Ọ dị mkpa! N'ime oge nsọ, mgbe ihe mgbu dị na mpaghara lumbar na afọ, ndị inyom ekwesịghị ikpo ọkụ ọ bụla, gụnyere akwụkwọ ọkụ.
Mkpụrụ ahụ ga - enye aka ịlọghachite ike nwoke. Site n'iji ose mee ihe n'oge na-adịghị anya, a ga-ahụ maka mgbanwe ka mma. Na ọgwụ ndi mmadu, a na-eji akwukwo nri eme ihe banyere arthrosis, sciatica na rheumatism. A na-eji ya eme ihe maka igwu ihe na nkwonkwo ọrịa.
Mkpụrụ ahụ na-agba ọsọ ahụ na-enyere mmadụ aka ịkwụsị cellulite. N'ihi ọnụnọ nke capsaicin na osisi, metabolism bụ nke a na-edozi. Akwụkwọ nri na-egbochi agụụ, nke bụkwa ihe bara uru ya. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị iji osisi ahụ mee ihe n'ụdị ya, ị nwere ike iji capsules na nsị ya, nke na-eme ka abụba daa. Tụkwasị na nke ahụ, akpịrị na-akpọ ose ahụ, ma otu n'ime ọnọdụ ndị na-ebelata ịdị arọ bụ iji mmiri eme ihe. Mmiri na-eme ka ọ ghara ikpo ọkụ. Maka ọnwụ nke ga-enyere gị aka. Ha na-enyere aka belata centimeters n'úkwù, yana iji belata agụụ - mgbe ị na-eji ha, ị gaghị achọ iri nri.
Ọzọkwa, a pụrụ iji tinordika, cilantro, barberry na apụl mee obere ihe ndị a ga-eji na-efu ọnwụ.
Ihe atụ nke tincture sitere na osisi a. Were 0,5 tsp. ata ogwu, 100 ml nke chamomile infusion na ọkara otu iko esi mmiri. Mix ose na esi mmiri na jụụ. Tinye ihe ngwọta chamomile na nje. Na-aṅụ 60 ml 3 ugboro n'ụbọchị tupu nri ruo ụbọchị 30 na-enweghị mmiri ọṅụṅụ. Ị nwere ike iji tincture na-eri na ahịa ọgwụ. 15 tụlee weere na 0,5 st. mmiri ọkụ na ihe ọṅụṅụ tupu nri.
Gbalikwa ịṅụ mmanya na ose. Tụkwasị na nke a, ihe ọṅụṅụ a na-enyere aka meziwanye nsogbu. Iji malite iri ginger. Ị nwekwara ike ịzụta ginger ntụ ntụ. Were 3 tbsp. l uzuzu. Gwakọta na 3 tbsp. l mmanụ aṅụ Tinye lemon wedges. Ị nwere ike itinye obere akwụkwọ mint. Ganye lita 1,3 nke mmiri ọkụ na obụpde maka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu awa. Wunye ngwọta n'ime thermos. Tinye 0,5 tsp n'ime ya. ose. Na-esi ọnwụ awa abụọ. Na-aṅụ 100 ml ugboro anọ n'ụbọchị tupu nri, n'ụdị okpomọkụ. A na-ejikwa ose na-ekpuchi ọnwụ. Site na ha akpụkpọ ahụ na-adị nro na velvety, cellulite na-ebelata. Jiri akwa tinye ya na chocolate ma obu nkpuru. Enwere ike iji osisi na mmanụ dị mkpa, yana kọfị.
Ị ma? Columbus tinyere chika na ụtaba na Spain, bụ ebe o toro dị ka osisi ọgwụ. Ka oge na-aga, e ji ya mee ihe dị ka nri na-esi nri.
Wunye 250 g nke koko ntụ ntụ n'ime mmiri ọkụ. Tinye otu teaspoons nke ose dị n'ime ihe ngwọta. Nwuo. Ka infusion jụụ. Mgbe ihe ngwọta ahụ na-amụba, tinye ya n'ahụ ma kechie ya na ihe nkiri. Were ihe dị ọkụ karị. Dinara n'elu ihe ndina ma buru mkpuchi. Mgbe nkeji iri abụọ gasịrị, kpochaa mmiri ọkụ.
Ikpokọta ilu ilu na pawuda dịka: 2 tbsp. l spoons nke ọ bụla mgwa. Tinye mmanụ ọ bụla dị mkpa. Echefula banyere mmanu ihe oriri. Gbasaa ahụ. Kechie obi. Mwepu dịka minit 20.
Kpochapụ 50 g kọfị. Mix ya na 1 tsp. ose. Tinye 2 tbsp. l mmanụ aṅụ, mix. Tinye ngwakọta ahụ. Ghọta onwe gị ma jide otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu awa, wee kpochaa ngwakọta.
Mkpụrụ mkpụrụ ọ bụla na mixer. Gwakọta ha na ude na ose ke ruru: 1 tbsp. mkpụrụ puree na 1 tbsp. l ose na 2 tbsp. l ude Mix ihe niile. Gbasaa ahụ ma kechie onwe gị. Mgbe otu ụzọ n'ụzọ atọ nke otu awa gasịrị, kpochaa ngwakọta ahụ n'okpuru ịsa ahụ ọkụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji ose na nri, ọ ga-enye aka iwusi ntutu na mbọ. Lee ihe nkpuchi ole na ole dabere na ya.
Were 1 tbsp. l obere osisi na-ere ọkụ. Jikọọ ya na 1 tsp. ngaji burdock mmanụ. Echefukwala itinye 1 tsp. mmanụ ndị na-emepụta ihe. Gwakọta ngwakọta ahụ n'ime isi ala ma tinye ntutu. Site n'elu tinye onu okpu, nke di n'elu ya ke akwa nhicha. Nọdụ ala na mkpuchi maka 1 hour. Mgbe ahụ, hichapụ ihe mkpuchi ahụ n'okpuru ịsa ahụ ma saa ntutu gị na ncha.
Ntutu ntutu isi
2 tbsp. l mmanụ si apricot jikọọ na 2 tsp. Mayonezi ụlọ na nsị nke "ọkụ" ihe oriri. Tinye 3 egg yolks. Mee ihe niile na ngaji ma tinye n'isi, na-ehichapụ ntutu isi. Were akwa nhicha n'isi gị. Mgbe ọkara otu awa, kpocha ntutu na mmiri ọkụ.
A na - eji cloves, bergamot na basil mepụta ezigbo ntutu isi ntutu.
Maka onwunwu na ntutu nke ntutu
½ tsp ose jikọrọ ya na 50 g mmanụ aṅụ. Tinye ngwakọta na ntutu isi, ịhịa aka na ntutu. Mgbe ahụ jiri ákwà akwa dochie isi gị, mgbe nkeji iri abụọ gasịrị, kpochapụ ihe nkpuchi ahụ na mmiri ọkụ.
Otutu oriri nke ose na-ebelata ohere nke cancer. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na a na-emegbu ya, enwere ike ịhụ ọrịa kansa. Tụkwasị na nke a, ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị agaghị eri nwa nwa ebu n'afọ mgbe ha na-anọ na nsọ nwanyị - ma ọ bụrụ na mgbu nwere ike ime. Ndị mmadụ na - arịa ọrịa nke akụkụ eriri afọ, dị ka: ọrịa ọnya, gastritis, wdg. Ndị ọzọ na - eme ka ahụ nkoropụ. Ọ bụrụ na ihe ọṅụṅụ nke ihe oriri na-abanye n'anya, ọkụ nke anụ ahụ nwere ike ime. A na-egbochi ose na-acha uhie uhie na ndị nwere nri na-eri nri na kiwi, unere na avocados. Ma n'agbanyeghi ihe a dum, ose uhie bu ihe bara uru;
Gladiolus: nkọwa nke ụdị kacha mma maka ogige ahụ
Clematis kwesịrị ekwesị kwachaa na-akpali lush okooko
Kedu uru na nkwonkwo nke Gribovsky Dill, esi esi eto ma jiri ya mee ihe na nkà mmụta ọgwụ?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Uru na nsogbu nke ose uhie: ọgwụ ọgwụ nke seasonings